ရုံးလာခဲ့ပါ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရုံးလာခဲ့ပါ..
Posted by May on Sep 26, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တာလေးပြောပြချင်ပါတယ်။။။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မှတ်ပုံတင်လာလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ သမီးကြီးကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးဖို့ သူ့အဖေနဲ့ သွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်. ဟိုရောက်တော့ form ၀ယ်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဖြည့်ရတာပေါ့.. ဖြည့်ပြီးလို့ ထပ်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကြတော့ form ကိုစစ်ပေးတဲ့ လ.၀.က မှ အရာရှိက “ဒီမှာမပြီးဘူး ရုံးလာခဲ့လို့” ပြောပါတယ်.. ဒါကြောင့်ကျမ အမျိုးသားက လာအတွက်လဲလို့မေးတော့… အမျိုးသမီးရဲ့ မှတ်ပုံတင်က လှိုင်မြို့နယ်ကဖြစ်နေလို့တဲ့လေ.. ဒီတော့ လှိုင်မြို့နယ်မှာ ဖိုပ်တွဲ သွားရှာရမယ်တဲ့… ကျမအမျိုးသားကလဲ ခပ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့ ဒီမှာ ခင်များတို့ တရားဝန် ထုတ်ပေးထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်မူရင်း copy နဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းတွေ ပါပေးတာတောင်မရဘူးလား… ဘာလဲ တာမွေကလူက တာမွေက မိန်းမကိုဘဲ ယူရမဲ့သဘောလား.. ကျနော်က ချင်းပြည်က မိန်းမကိုယူမိရင် ချင်ူပြည်ထိ ဖိုပ်တွဲ သွားရှာပေးရမှာလားဆိုပြီး စိတ်ဆိုးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်… ရှာဖို့လိုတယ်ဆိုလဲ သူတို့ရုံအချင်းချင်း ရှာတာပိုမမြန်ပေဘူးလား…. ခုထပ်ထိ သွားခိုင်းလို့ကိုမရတော့ဘူး… သူတို့ပြောပြော နေတဲ့ သတင်းထဲမတော့ နေ့ချင်းပြီးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုဘဲ… အင်း ကိုယ်တိုင်ကြုံရမှသိတာပါ….
ဆင်ခြေဆင်လက် ဆင်နားရွက်တွေကတော့ ရိုးနေပါပြီ …. သူတို့နဲ့ မဖြစ်လို့သာ ပတ်သတ်ရတာ .. တကယ်ပတ်သတ်ရမှာ ကြောက်နေမိတယ်
ကျွန်တော်တို့ရွာက အရင်က လှည်းကူးမြို့နယ်ထဲမှာပါတော့ မှတ်ပုံတင်လည်းလှည်းကူးမှာ လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ရှေ့က အက္ခရာ က (လကန) ပေါ့ဗျာ။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က မှတ်ပုံတင်ပျောက်သွားလို့ ပြန်လုပ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရွာက ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ထဲရောက်သွားလို့ ဒဂုံတောင်ကို သွားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှုတွဲက လှည်းကူး လ၀ကရုံးမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် လှည်းကူးကို တစ်ခေါက်သွားရပါတယ်။ အဲဒီအမှုတွဲရတော့မှ ဒဂုံတောင် လ၀ကရုံးက မှတ်ပုံတင်အသစ် ထုတ်ပေးလို့ရတာပါ။ နေ့ချင်းပြီးလုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်ပါဘို့ကတော့
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါလဲ လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပါပဲ
ပါတ်သက်မိလို့ကတော့ ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ မလွဲ ဧကန်ပါ။
ဟုတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှု၊စည်းမျဉ်းတွေက ပိုလွန်းတာ၊ အကျိုးအကြောင်းမဲ့စွာ စီစစ်လွန်းတာ အဲဒါတွေကို အခွင့်အရေးယူပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြတာကြောင့် လူတွေကို အစိုးရဌာနတွေနဲ့ မပတ်သက်ချင်လာအောင် လုပ်နေတာပဲ။
စာရွက်စာတမ်းကလဲ သူတို့တော်းတဲ့ အတိုင်း အဖေ အမေ မှတ်ပုံတင်.. သန်းခေါင်စာရင်း ပါပြီးသားလေ…
မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ် ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့ဗျာ။ ၀န်ထမ်းတွေက တော်ရုံတန်ရုံကိစ္စကို ပြုတ်မှာကြောက်နေတာနဲ့
လွဲမှာကြောက်ပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ မလုပ်ပေးတော့ ကြာကုန်တာပေါ့။ သူတို့ကို သေသေချာချာမေးပါ။ မလိုအပ်ပဲရစ်နေတာဆိုရင် တိုင်လို့ရပါတယ်။
လိုအပ်မယ်ထင်ရင်ပေါ့ …. လှိုင်မြို့နယ်မှုး လ၀က က နိုင်အောင်ထွန်းတဲ့ ကိုတိုးလို့လဲခေါ်တယ်။
တပြားမှပေးစရာမလိုပါ။ ကျနော့နာမည်ပြောလိုက်ပေါ့အဟဲ … ဖက်တီးလို့တော့သွားမပြောနဲ့နော်သိမှာမဟုတ်ဘူး … နာမည်ရင်းကိုပြော ..။
ပိုင်ရာဆိုင်ရာလူကြီး၅ယောက်ရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ ရတယ်တဲ့
ကျုပ် က တော့ တစ်ပြားမှ မကုန်ခဲ့ဘူး
ရန်ပုံငွေ ထည့်မှ ကဒ်ထုတ်ပေးမယ် လုပ်တာ
ဘယ် နှယ့် ၊ မထည့်နိုင်ပါဘူး ဆိုလဲ မရ
လဝက ရုံးထဲ က
ဝန်ထမ်းမမ ခုံရှေ့ မှာ နေ့ တိုင်းသွားထိုင်
အဲ့နည်း ကောင်းတယ်.. မှတ်ထားရမယ်… နောက် အစိုးရရုံးတွေသွားရင် အကို့နည်း သုံးရတော့မယ်… ကျေးဇူးပဲဗျာ… လေးစားပါတယ်… ရောင်းရင်း
မောင်လေ လေးရဲ့အဟုတ်လား ဆာမိလား
အဲလိုဆို ကျွန်တော့်အကြောင်းက ပိုတောင်ဆိုးနေသေးတယ်
အမေက ပြည်မပုတင်၊ အဖေက မန္တလေးမပုတင်၊ ကျွန်တော်က တောင်ပိုင်းသျှမ်းပြည် လင်းခေးသားဆိုတော့ ၁၈ နှစ်ကို အတော်လေးကျော်မှ မပုတင်လဲဖို့ သွားလိုက်ရတဲ့ခရီး
ကွယ်… ပြော မပြောချင်တော့ဘူး
မနောတုန်းကတော့ မှတ်ပုံတင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ပြည့်လဲတာတောင် ဟိုစားပွဲသွားဦး
ီဒီစားပွဲသွားဦးနဲ့ အလုပ်တွေကိုရှုပ်နေတာပဲ နောက်ဆုံးတော့ မရတဲ့အဆုံးတော့ ဦးစီးမှူးအခန်းဘယ်မှာလဲဆိုပြီး ဦးစီးမှူးနဲ့တိုက်ရိုက်ဝင်တွေ့လိုက်တော့ ဦးစီးမှူးက ဘာပြောလဲဆိုတော့ ဒီကဒ်နဲ့လည်း ရပါတယ်တဲ့ ဘာလို့လာလဲနေတာလဲတဲ့လေ…